China D-Glucuronolactone fanamboarana sy ozinina | Mingxing
Flavour sy hanitra
Mpanelanelana mpamono peste
Mpanelanelana amin'ny fanafody
Fampahalalana tena ilaina:
Anarana anglisy: Glucuronolactone; D-glucuronolactone
Fomban'ny molekiola: c6h8o6
Milanja molekular: 176.1
Tabilao firafitra molecular:
Toetra ara-batana sy simika:
Teboka mitsonika: 170-176 oC
Teboka 403.5 oC amin'ny 760 mmHg
Tselatra: 174.9 oC
Atiny: 98,5% - 102%
Glucuronolactonedia simika. Izy io dia afaka mamorona amin'ny vatana. Izy io koa dia hita amin'ny sakafo ary vita amin'ny laboratoara.
Ny glucuronolactone dia mpiorina malaza amin'ny zava-pisotro misy angovo satria voaporofo fa mahomby amin'ny fampitomboana ny haavon'ny angovo sy ny fanatsarana ny fahamailoana.Glucuronolactone supplementement dia mampihena be koa ny "zavona atidoha" ateraky ny toe-pahasalamana isan-karazany. Na dia mety mihoatra ny hita ao amin'ny ambin-tsakafo aza ny haavon'ny glucuronolactone amin'ny zava-pisotro misy angovo, dia azo antoka sy azo leferina tsara ny glucuronolactone. Nanatsoaka hevitra ny manam-pahefana momba ny sakafo ara-tsakafo eropeana (EFSA) fa ny fihanaky ny glurononolactone amin'ny fihinanana zava-pisotro mahery matetika dia tsy Ny haavon'ny glukuronolactone izay tsy voamarika akory dia 1000 mg / kg / andro.
Ho fanampin'izany, hoy ny The Merck Index, ny glucuronolactone dia ampiasaina ho toy ny detoxicant. Ny atiny dia mampiasa glucose mba hamoronana glucuronolactone, izay manakana ny anzima B-glucuronidase (manefy metabolika ny glucuronides), izay tokony hampisondrotra ny haavon'ny ra-glucuronide. Ny glucuronides dia mitambatra amin'ny akora misy poizina, toy ny morphine sy ny depot medroxyprogesterone acetate, amin'ny alàlan'ny fanovana azy ireo ho toy ny glucose-liururideide-conjugates izay mivoaka ao amin'ny urine. manapoizina. Ny asidra glucuronic maimaim-poana (na ny glucuronolactone ester-ny tenany) dia tsy misy fiatraikany amin'ny detoxification noho ny glucose, [citation ilaina] satria ny vatana dia mampifangaro asidra UDP-glucuronic avy amin'ny glucose. Noho izany, ny fihinanana gliosida ampy dia manome asidra UDP-glucuronic ampy ho an'ny detoxication, [citation ilaina] ary ny sakafo manankarena glucose dia mazàna be any amin'ny firenena mandroso.
Ny glucuronolactone koa dia asiana metabolisma ho asidra glucaric, xylitol, ary L-xylulose, ary ny olombelona dia mety afaka mampiasa glururonolactone ihany koa ho toy ny mpialoha lalana ny synthesis asidra ascorbic
Ny tena fiasan'ny glucuronolactone dia ny fanatsarana ny fiasan'ny detoxification amin'ny atiny, ny fanarenana na ny fanatsarana ny fiasan'ny ati-doha, ny fifehezana ny hery fiarovan'ny vatana, ny famelomana ny hoditra, ny fahanteran'ny fahanterana, ny fanatsarana ny hypoxia, ny fanafoanana ny havizanana ary ny fanatsarana ny fahaizana mifehy sy ny fandrindrana ny asan'ny taova isan-karazany. Ho an'ny hépatite maranitra sy maharitra, cirrhosis, na ho an'ny fanapoizinana poizina amin'ny sakafo na zava-mahadomelina。
Fonosana sy fitehirizana: Baoritra 25kg.
Fitandremana fitehirizana: mitahiry ao amin'ny trano fanatobiana mangatsiaka, maina ary misy rivotra. Halaviro ny loharanom-afo sy ny hafanana. Miaro amin'ny tara-pahazavana mivantana. Ny fonosana dia tsy maintsy asiana tombo-kase ary arovana amin'ny hamandoana.
Fampiharana: fanampiana sakafo, mpanelanelana amin'ny fanafody
Fahaiza-mamokatra: 1000 taonina / taona.
Teo aloha: Betaine Anhydrous
Manaraka: Hordenine hydrochloride
3-Sira calcium calcium asidra Hydroxybutanoic
3-Masira magnesium asidra Hydroxybutanoic
Daixi 3th Road, Zouping County Shandong Faritany, Sina